प्रवृत्तिसँगै निवृत्ति मार्गको अवलम्बन (महाभारत–चिन्तन) – Chitwan Post
स्यूमरश्मि र कपिल मुनिका बीचमा प्रवृत्ति र निवृत्ति मार्गका विषयमा कुराकानी हुन्छ । यमनियमहरुको पालन गर्ने सन्न्यासीहरु ज्ञानमार्गको आश्रय लिएर परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् तर उनीहरुलाई गृहस्थ आश्रममा रहने र यस लोकको धर्म पालन गर्ने के आवश्यकता रहन्छ ? भनी कपिल मुनिले प्रश्न गरेपछि स्यूमरश्मिले त्यसको प्रत्युत्तर दिन्छन् । जसरी सम्पूर्ण प्राणीहरु आमाको काखको सहारा पाएर जीवन धारण गर्छन् त्यसरी नै गृहस्थ आश्रमको आश्रय लिएर नै अन्य आश्रमहरु टिक्दछन् । गृहस्थले नै यज्ञ गर्छ र तपस्या पनि गर्छ । शुभ कर्मको आचरण गर्ने धर्मको मूल कारण नै गृहस्थाश्रम हो । गृहस्थाश्रमबाहेक अन्यत्र कुनै किसिमले सन्तान सुलभ पनि छैन ।
कसैले गृहस्थाश्रमको पालन गर्नाले मोक्ष हुँदैन भन्दछन् र त्यो सत्य पनि हुन सक्छ । जो श्रद्धारहित, मूर्ख र सूक्ष्म दृष्टिले वञ्चित छन्, अस्थिर, अल्छी, थकित र आपूmले पहिला गरेका कर्मबाट सन्तप्त छन् त्यस्ता अज्ञानी व्यक्तिले नै सन्न्यास मार्गको आश्रय लिएर गृहस्थाश्रममा शान्तिको अभाव देख्छन् । मान्छे जन्मले नै देवता, पितृ र ऋषिहरुको ऋणी हुन्छ । गृहस्थाश्रममा रहेर ती ऋणहरु नचुकाएसम्म मान्छेले मोक्ष पनि प्राप्त गर्न असम्भव छ । श्रीहीन र अल्छी पण्डितहरुले कर्महरुको त्यागद्वारा मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने मत चलाएका छन् र सुन्दा यो सत्यजस्तै लाग्छ तर वास्तवमा यो मिथ्या हो । यस मार्गमा कसैलाई वेदका सिद्धान्तको थोरै पनि ज्ञान हुँदैन । जुन ब्राह्मणले वेदशास्त्रअनुसार यज्ञको अनुष्ठान गर्छ, उसमाथि पापको आक्रमण हुँदैन र पापले उसलाई आपूmतर्पm खिच्न पनि सक्तैन । वेदहरुको अनादर गर्नाले, मूर्खताले र छलकपटले कुनै पनि व्यक्तिले परब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्तैन । वेदमा बताइएका कर्महरुको आश्रय लिएका खण्डमा मात्र उसले परब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्तछ ।
स्यूमरश्मिको कुरा सुनिसकेपछि कपिल मुनिले पनि प्रवृत्ति र निवृत्ति विषयक आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् । बुद्धिमान् व्यक्तिका लागि चातुर्मास्य आदि अनुष्ठानको विधान गरिएको छ किनकि यिनमा सनातन धर्म रहन्छ परन्तु जो सन्न्यास धर्म स्वीकार गरेर कर्मानुष्ठानबाट निवृत्त भएका छन् र धीर, पवित्र एवं ब्रह्मस्वरुपमा स्थित छन् त्यस्ता व्यक्तिले ब्रह्मज्ञानद्वारा नै देवताहरुलाई तृप्त गर्दछन् । जो सम्पूर्ण प्राणीहरुमा आत्मस्वरुपले स्थित छन् र सम्पूर्ण प्राणीहरुलाई आत्मभावले नै देख्छन्, जसको कुनै विशेष पद छैन त्यस्ता ज्ञानी पुरूषको पदचिह्न खोज्ने वा तिनको गति पत्ता लगाउने देवता पनि त्यस्तो निवृत्तिमार्गमा मोहित हुन्छन् ।
मान्छेका हातखुट्टा, वाणी, पेट र जननेन्द्रिय यी चार द्वार छन् । प्रत्येक व्यक्तिले यिनको द्वारपाल हुने चाहना राख्नुपर्छ वा यिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी चार द्वारको संयमद्वारा प्राप्त गर्न योग्य ऋक्, यजु, साम र अथर्वरुप चार मुखले युक्त परमपुरूषलाई भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग र अष्टाङ्गयोग यी चार उपायद्वारा प्राप्त गर्दछ । बुद्धिमान् व्यक्तिले जुवातास खेल्नुहुँदैन, अर्काको धन ग्रहण गर्नुहुँदैन, नीच व्यक्तिले बनाएको अन्न ग्रहण गर्नुहुँदैन र क्रोधमा आएर कसैलाई मारपिट पनि गर्नुहुँदैन । यसो नगर्दा मान्छेका हातखुट्टा सुरक्षित हुन्छन् । कसैलाई गाली नगर्ने, व्यर्थ नबोल्ने, अर्काको चुक्ली नलगाउने वा निन्दा नगर्ने र थोरै एवं सत्य वचन बोल्नका लागि सदैव सावधान रहनाले वाणीरुपी द्वारको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
भोकै नरहने तर धेरै नखाने, सदैव भोजनका लागि लालायित नहुने, सज्जनहरुको सङ्गत गर्ने र जीवननिर्वाहका लागि जति आवश्यक छ त्यति नै अन्न ग्रहण गर्ने गरेका खण्डमा उदररुपी द्वारको संरक्षण हुन्छ । आफ्नी धर्मपत्नीका साथमा मात्र रमण गर्ने, अर्काकी स्त्रीसँग घुमघाम नगर्ने, आफ्नी स्त्रीसँग पनि रजस्वलाबाट निवृत्त नभएसम्म र समागमका लागि नबोलाएसम्म मनमा एकपत्नीव्रत धारण गर्नाले जननेन्द्रियरुपी द्वारको रक्षा हुन सक्छ । जुन विद्वान् व्यक्तिका जननेन्द्रिय, पेट, हातखुट्टा र वाणी यी सबै द्वार पूर्णतः सुरक्षित छन् त्यही व्यक्ति नै वास्तवमा ब्राह्मण हो । जसका यी चारै द्वार सुरक्षित छैनन् उसका सारा शुभकर्महरु निष्फल हुन्छन् ।
बाहूपधानं शाम्यन्तं तं
देवा ब्राह्मणं विदुः ।।
अर्थात् जसका साथमा वस्त्रका नाममा एउटा लगौंटीमात्र छ, ओढ्नका लागि च्यादरसम्म छैन, जो विना बिछ्यौना सुत्छ, हातको तकिया लगाउँछ र सदैव शान्तभावले रहन्छ त्यसलाई देवताले ब्राह्मण मान्दछन् । जो सम्पूर्ण प्राणीहरुबाट निर्भय छ, जसबाट समस्त प्राणीले डर मान्दैनन् र जो सबै प्राणीहरुको आत्मा छ त्यसैलाई देवताले ब्रह्मज्ञानी मान्दछन् ।
प्रवृत्तिमार्गी मान्छेले योगशास्त्रका सूत्रहरुमा भनिएको यमनियम आदिको अनुष्ठान गर्न सक्तैन । शास्त्रहरुमा कथित कर्म श्रेष्ठ फल दिने, उन्नति गर्ने र स्थायी हुन्छन् तापनि प्रवृत्तिमार्गी मान्छेले तिनलाई निष्फल र अस्थिर ठान्दछन् । फलवान् यज्ञयागादिको स्वरुप र विधिविधानलाई जान्न निकै कठिन छ । जाने पनि तिनको अनुष्ठान गर्न अभैm कठिन छ । यदि अनुष्ठान गरिहालियो भने पनि तिनबाट नाशवान् फलकै प्राप्ति हुन्छ ।
कर्म गर र कर्म छोड परस्परविरूद्ध यी दुवै मार्ग छन् । यिनको उपदेश गर्नाले वेदको प्रामाणिकता कसरी निर्वाह हुन्छ र त्याग कसरी सफल हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा स्यूमरश्मिले कपिल मुनिसँग राख्छन् । तपाईंले सन्मार्गमा रहेर यहाँ योगमार्गका फलको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ तर कर्ममार्गमा रहेर तपाईंहरु जुन यज्ञको उपासना गर्नुहुन्छ त्यसबाट यहाँ कस्तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुन्छ भनेर कपिल मुनिले स्यूमरश्मिसँगै जिज्ञासा राख्छन् । स्यूमरश्मिले म हजुरसमक्ष ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहनाले आएको हुँ र वादविवाद गर्ने चाहनाले आएको होइन, तसर्थ मलाई अक्षय सुखका बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छन् ।
जो जो शास्त्रले जुन जुन अर्थको आचरण वा प्रतिपादन गर्छन् ती ती व्यक्ति सबै प्रवृत्तिहरुमा सफल हुन्छन् । जुन साधनको जहाँ अनुष्ठान हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ अक्षय सुख प्राप्त हुन्छ । जसले ज्ञानको अनुसरण गर्छ, ज्ञानले त्यसका समस्त सांसारिक बन्धनको नाश गर्दछ । विना ज्ञानको जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यसले प्रजालाई जन्म र मरणको चक्करमा राखेर त्यसको विनाश गर्दछ । शास्त्रलाई यथार्थरुपमा नजानेर केही व्यक्ति वितण्डावादको नै बलले राग र द्वेषद्वारा अभिभूत भएका कारण अहङ्कारको अधीनमा पुगेका छन् । शास्त्रको यथार्थ त¤वलाई नजानेका कारण तिनीहरु शास्त्र वा शास्त्रका अर्थमाथि डकैती गर्ने लुटेरा मानिन्छन् । उनीहरुले शम, दम आदि साधनहरुलाई सदैव निष्फल देख्छन् र निष्फल नै ठान्दछन् । ज्ञान, ऐश्वर्य आदि सद्गुणहरुको जिज्ञासा राख्तैनन् ।
त्यस्ता तमोगुण प्रवृत्तिका व्यक्तिको तमोगुण नै सबैभन्दा ठूलो आश्रय हुन्छ । ‘यो यथाप्रकृतिर्जन्तुः प्रकृतेः स्याद् वशानुगः’ (पूर्ववत् १२।२६९।५५) अर्थात् जुन प्राणीको जस्तो प्रकृति वा बानी हुन्छ त्यस प्रकृतिको ऊ अधीन हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका मनमा काम, क्रोध, दम्भ, द्वेष, असत्य र मद यी प्रकृतिजनित गुण नै विद्यमान रहन्छन् । परम गति प्राप्त गर्ने चाहना राखेका संयमशील सन्न्यासीले सोचविचार गरेर शुभ र अशुभ कर्मको परित्याग गर्छन् ।
कपिल मुनिको कुरा सुनेर स्यूमरश्मिले पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छन् । शास्त्रका अर्थलाई नजानीकन कसैको कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्ति हुँदैन । ‘यः कश्चिन्न्याय्य आचारः सर्वशास्त्रमिति श्रुतिः, यदन्यायमशास्त्रं तदित्येषा श्रूयते श्रुतिः’ (पूर्ववत् १२।२६९।५८) अर्थात् जुन न्यायोचित आचार छ त्यो सबै शास्त्र हो र जुन अन्यायपूर्ण व्यवहार छ त्यो अशास्त्रीय हो भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले शास्त्रको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर कुनै प्रवृत्ति सफल हुँदैन । तसर्थ गृहस्थाश्रम जस्तो आश्रममा रहेर प्रवृत्ति र दुष्कर कर्म गरेपछि निवृत्ति वा मोक्ष प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले प्रवृत्तिमार्गलाई सार्थक बनाउँदै जान सकेमा हाम्रो निवृत्ति वा मोक्षमार्ग पनि सार्थक हुने सम्भावना देखिन्छ ।